I-Newsletter No. 7 I-Festive Edition 2018 - I-Foundation Foundation
Ikhaya I-Newsletter No. 7 I-Festive Edition 2018
I-Newsletter No. 7 I-Festive Edition 2018
Uyemukelwa kunguqulo yakamuva yezindaba ezinomvuzo. Sinezindaba eziningi nezindaba zakho. Ungahlala usesikhathini ngokudla kwethu okuvamile kwe-Twitter kanye namabhulogi masonto onke ekhasini lasekhaya. Jabulela iSikhumbuzo SeScott semilingo ngobusuku obumnandi e-Edinburgh. Yonke impendulo yamukelekile kuMary Sharpe mary@rewardfoundation.org.
Kulo magazini I-Royal College of General Practitioners-ama-workshops avunyelwe I-World Health Organization ibona i-Porn Harms Umnikelo wethu oPhenyo I-autism, i-Porn and Sexual Offending Cambridge, eNgilandi EFrankfurt, eJalimane Virginia Beach, eU.SA I-Budapest, eHungary SEBENZA EZIKHOLENI UKUSIZA ABAZALI Umklomelo we-CEO Ukubukeka kwemidiya U-Julie McCrone we-BBC Alba uqale ukudubula noRuairdh Maclennan noMary Sharpe Izifiso ezifudumele zango-2019
Izindaba I-Royal College of General Practitioners-ama-workshops avunyelwe Kulo nyaka sagijima ama-workshops e-10 RCGP-avunyelwe umthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi empilweni yengqondo nengokwenyama e-UK nase-Ireland. Sasiba nabantu abahamba ngezinyawo bevela ezindaweni ezikude njengeFinland, Estonia, eBelfast naseNetherlands. Abahlanganyeli bahlanganisa ama-GP, izifo zengqondo, izazi zengqondo, abafundi, izisebenzi zentsha, abasebenzi bezenhlalakahle, othisha, abacebisi, abameli kanye nodokotela bezocansi.
Iqembu le-TRF eGlasgow noKatriin Kütt, ofundisa ngocansi e-Eesti Tervishoiu Muuseum e-Estonia kanye nomqeqeshi wokuthola kabusha uMatthew Cichy waseBelfast Sajabula ukuhlanganyela ne- Isikhungo Sobusha Nezobulungiswa Bezobugebengu ye-workshop yeGlasgow kanye ne-firm firm Anderson Strathern eyodwa ye-Edinburgh eyodwa. Siphinde sabambisana kakhulu Isevisi yokululekwa eNingizimu West eKillarney lapho sizobuyela khona ngoFebhuwari ngenxa yesidingo esikhulu. Kuyasithokozisa intshisekelo, umdlandla kanye nesifiso sokuba nemihlangano yokufundisana eningi okuzofakwa kuyo iCork entwasahlobo. Uma ungathanda ukuthi size endaweni yakho, sicela usazise maduzane njengoba sisendleleni yokusetha izinsuku nezindawo ezintsha zango-2019.
UDarryl noMary noJoy O'Donoghue no-Anna Marie O'Shea weSikhungo Sokwelulekwa saseNingizimu South eKillarney I-World Health Organization ibona i-Porn Harms Ngomhla kaJuni iNhlangano YezeMpilo Yezwe (i-WHO) yaqaphela "ukucindezeleka kokuziphatha ngokocansi" (CSBD) okokuqala ngqa kulo lonke i-International Classification of Diseases (ICD-11). Bheka wethu blog phezu kwakho. Iphumelele ekomidini yokukhetha yesayensi nabachwepheshe bezokwelapha naphezu kokuphikiswa okunomthelela okuvela ezinkampanini ezithakazelisayo ezixhunywe embonini yezocansi ze-porn-dollar eziyizigidigidi ezibandakanya i-sexologists ephika ukuthi izithombe ezingcolile kakhulu zingalimaza.
Umnikelo wethu oPhenyo I-Foundation Foundation ayihlolisisi nje ucwaningo olusha mayelana nemiphumela yocansi nsuku zonke, kodwa futhi sinegalelo kulo futhi silenze litholakale kubachwepheshe abadinga ukwazi. Ukuze lokho kuqede ukubuyekezwa kontanga yethu iphephalokho kufingqa ucwaningo olwenziwe ku-4th Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Ngezimo Eziphuzayo Zokuziphatha (I-ICBA) yanyatheliswa kumagazini wezobuchwepheshe Ukuphuza ngokweqile nokucindezela. Nakhu wethu blog phezu kwakho. Sicela uxhumane nathi uma ungathanda ukuthola iphepha eligcwele. Siyajabula ukumemezela ukuthi iphepha elifanayo lifingqa amaphepha amasha yocwaningo kusukela ku-5 yonyakath Inkomfa ye-ICBA ithunyelwe futhi izoshicilelwa, konke kuhamba kahle, ekuqaleni kwe-2019. Sizokukwazisa nini.
I-autism, i-Porn and Sexual Offending Ukukhathazeka kwamadoda amasha kwi-autistic spectrum, ikakhulukazi labo abane-Asperger's Syndrome ephezulu esebenzayo, ukubhebhetheka kwe-intanethi kuye kwasizwa. Uma umuntu onololu hlobo lwesimo sezinzwa kusuka ekuzalweni uye wahlushwa ukutholakala kwezithombe ezingcolile zezingane, kuyacaca ukuthi kunamaphutha amaningi ohlelweni lwezokwahlulela njengoba luphatha laba bantu. Sibhalile eziningana blogs kule ndaba. Bheka lapha futhi Indaba Yomama. Uhambo nge-TRF Cambridge, eNgilandi I-CEO yethu, uMary Sharpe, uhloniphekile ukukhuluma eLucy Cavendish College, eCambridge ngoJuni kulo nyaka ngesimemo sikaMongameli wayo, uJackie Ashley. UMariya uyilungu lomhlobo lapho. Isihloko Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ne-Brain's Brain ihlala njalo isixuku esihle sabantu futhi isiqiniseko, ikolishi lajabula kakhulu ngamalungu e-90 eyunivesithi nakubantu ababekhona. Kwakungomunye wezixuku ezinkulu kunabo bonke abakhona ekolishi inkulumo yeningi. Sabe sesijabulela isidlo sakusihlwa esihlelekile ekamelweni lokudlela ekolishi lapho uMariya ehamba khona udumo. Kwakungcono ukubuyela eCambridge.
EFrankfurt, eJalimane Sikholelwa (njengoba kwenza ama-Amazon uhlu lwe-bestseller) ukuthi incwadi kaGary Wilson Ubuchopho bakho ku-Porn - Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi ye-Addiction ekhulayo iyincwadi enhle kakhulu emakethe echaza izinkinga ezungeze izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi nemiphumela yayo empilweni nasebudlelwaneni. Ngamakhulu ezindaba zokutakula futhi echaza isayensi kahle, yenza isihloko sifinyeleleke kakhulu. Ukuze sisize ukuyikhuthaza kwezinye izilimi (kakade ngesiDashi, isi-Arabhu nesiHungary, ezinye ziqhubeka) safika eFrankfurt Book Fair eJalimane. Sithole abantu abaningi abasebenzayo futhi sinethemba lokuthuthukisa labo oxhumana nabo ngonyaka ozayo.
Virginia Beach, eU.SA Abafundi bajabula kakhulu ngokuba yizikhulumi ku Society for the Promotion of Health and Health (SASH) ingqungquthela yaminyaka yonke kulo Mhlaka-Okthoba eVirginia Beach, eU.SA lapho senze khona abahlanganyeli amasu ethu okufunda ezikoleni kanye neminye imisebenzi yemisebenzi yabasebenzi. UMary Sharpe, i-CEO yethu, uyilungu leBhodi labaqondisi lale nhlangano futhi uhlale ehambisana nentuthuko phakathi kochwepheshe kulo mkhakha ngaphesheya kwechibi.
I-Budapest, eHungary I-TRF yajabula ukumenywa eBudapest, eHungary ukuba ikhulume enkomfeni yomhlaba wonke eyabanjwe yiNgqongqoshe Wezobulungiswa kanye ne-NGO ERGO ekuqaleni kukaDisemba. Iphepha likaMary lalibhekene nomthelela wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ngokuhweba kwabantu kanye nemikhuba emihle yokubhekana nayo. Kwakukhona izikhulumi ngokuxhashazwa ngokocansi nokuhlukumeza izingane kusukela eParis naseWashington DC.
UDawn Hawkins waseNational Center ekuqhutshekeni ngokocansi eWashington DC
SEBENZA EZIKHOLENI I-TRF iyaqhubeka nokufundisa izikole zombili emikhakheni ezimele nakuhulumeni. Izinhlelo zethu eziyisithupha zezifundo zisemkhankasweni wokuhlolwa nokuthuthuka ngaphambi kokuba sizikhiphe ngenani elifanele kakhulu ezikoleni ngo-6. Umphathi wethu omkhulu uzobe ekhuluma ngokuxhumana phakathi kwezithombe zocansi nokuthumelelana imiyalezo yocansi emcimbini wePolitiki Hub ngomhlaka 2019 Januwari 31.
UKUSIZA ABAZALI Nakhu blog, Umhlahlandlela wabazali wezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ngolwazi mayelana nemithombo enkulu yamahhala. Ivuselelwe njalo ukuze ubuke njalo.
UMary Sharpe u-CEO wethu wakhethwa futhi wakhethwa ukuba a NatWest WISE100 umklomelo wesifazane ngomsebenzi wakhe ensimini entsha yokuphayona. Siyajabula ngokuthi umsebenzi wethu uqala ukuqashelwa.
Ukubukeka kwemidiya I-BBC (i-TV neRadio), i-Daily Mail, IThe Times, iLondon Evening News nezinye izitolo zezindaba zibhalela ngomsebenzi wethu. Bheka wethu ikhasi lezindaba ukuze uthole imininingwane eyengeziwe. UMary kumele avele e-documentary ku-BBC Scotland mayelana nezingane nezithombe zobulili ezingcolile kanye ne-BBC ALBA eSwitzerland.
U-Julie McCrone we-BBC Alba uqale ukudubula noRuairdh Maclennan noMary Sharpe Izifiso ezifudumele zango-2019 Abasebenzi kanye nabangane beThe Reward Foundation bangathanda ukukufisela konke okuhle kakhulu ngo-2019. Sicela usilandele ku-Twitter @brain_love_sex. Uma wazi noma ubani ongathanda ukufunda okwengeziwe mayelana nomthelela wezocansi empilweni nasebuhlotsheni sicela uthande Ubuchopho bakho ku-Porn - Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi ye-Addiction ekhulayo.
Izifiso ezifudumele zango-2019 Abasebenzi kanye nabangane beThe Reward Foundation bangathanda ukukufisela konke okuhle kakhulu ngo-2019. Sicela usilandele ku-Twitter @brain_love_sex. Uma wazi noma ubani ongathanda ukufunda okwengeziwe mayelana nomthelela wezocansi empilweni nasebuhlotsheni sicela uthande Ubuchopho bakho ku-Porn - Izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi kanye neSayensi ye-Addiction ekhulayo.
I-Copyright © 2019 I-Reward Foundation, Wonke amalungelo agodliwe. Ufuna ukushintsha ukuthi uthola kanjani lawa ma-imeyili?